नेपाली कांग्रेसमा व्याप्त गुटगत राजनीति आसन्न १४ औँ महाधिवेशनको रापले छताछुल्ल भएको छ । कञ्चनपुरमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) दुई भागमा विभाजन भएको छ ।
गाउँ/नगरपालिकाको अधिवेशनमा संस्थापन (देउवा समूह) दुई चिरामा विभाजन भएको स्पष्ट देखाएको परेको छ । संस्थापन पक्ष निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र एनपी साउँदको कञ्चनपुरमा छुट्टा–छुट्टै उपगुट छन् ।
कञ्चनपुरबाट कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा छवि बनाएका लेखक र साउँद निकटबीच अधिवेशनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । गाउँ/नगर पालिकाको अधिवेशनमा साउँद र कोइराला समूहले गठबन्धन बनाएको चर्चा छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका भीमदत्त नगरपालिकाको कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउनका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा लेखक र साउँद नै सक्रिय भएका छन् ।
कांग्रेस भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्य समितिको नेतृत्वको लागि युवा नेता आशिष खत्री र अच्युत कलौनीले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
नगर सभापतिका उम्मेदवार कलौनी रमेश लेखक निकट हुन । यस्तै खत्री कांग्रेसको कोइराला समूहका हुन । यद्यपी अहिले उनलाई एनपी साउँदले सघाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
लेखक निकट महेन्द्र खड्काले पनि भीनपा नगर सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गरे पनि अहिले उनी पछाडी हटेका छन् । लेखक समूहको कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा वर्चश्व छ भने साउँद समूहको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा दबदबा छ ।
पूर्वमन्त्री लेखकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने कञ्चनपुरको सदरमुकामको भीमदत्त नगरपालिकाको नेतृत्व हत्याएर उनलाई कमजोर देखाउन पूर्वमन्त्री साउँद सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
साउँद महाअधिवेशनका लागि गृहजिल्ला कञ्चनपुरमा छन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन साउँद जिल्लाका नेता÷कार्यकर्तासंगको छलफलमा व्यस्त रहेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत कञ्चनपुरमा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । असोज ९ गते नगर–गाउँ अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।
महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा केन्द्रदेखि गाउँ–गाउँसम्मको चहलपहल बाक्लिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्य समितिका लागि युवा नेता आशिष खत्री नेतृत्वको प्यानल घोषणा गरिएको छ ।
उनको प्यानलबाट उपसभापतिमा राजेन्द्र चन्द र सुशिल साउँदलाई खडा गरिएको छ । यस्तै सचिवमा गगन सिंह धामी र पुष्करनाथ जोशीलाई अगाडि सारिएको छ । खत्रीकै प्यानलबाट सहसचिवमा दीपकराज विष्ट र हिरादेवी दमाईलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।
कांग्रेसलाई गुट, उपगुट रहित बनाएर बलियो र सुदृढ बनाउन नगर सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको नेता खत्रीले बताए । ‘गुट, उपगुट रहित कांग्रेस हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मूलमन्त्र हो ।’ उनले भने ।
सभापतिका दाबेदार खत्री र कलौनी दुवै जना विद्यार्थी राजनीतिबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए । खत्री वि.सं. २०५१ सालमा सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसको नेपाल विद्यार्थी संघको ईकाई सभापति पनि बसेका थिए । त्यहीँबाट उनले सक्रिय राजनीति सुरु गरेका हुन ।
वि.सं. २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा उनी सक्रिय रुपमा लागेका थिए । त्यहीँ क्रममा केही दिन उनी कारगार पनि बसेका थिए । नेविसंघको विद्यार्थी राजनीतिबाट पाइला टेकेका खत्री अहिले पनि कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
सभापतिका अर्का दाबेदार कलौनीले वि.स. २०५७ सालमा नेविसंघबाट सक्रिय राजनीति थालेका थिए । उनी कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सह–महामन्त्री जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् ।